RASMI: Manchester United oo ku dhawaaqday kulan ciyaareed lagu sharfayo Carrick – Gool FM
(Manchester), 02 Maarso 2017 –Kooxda Kubadda Cagta Manchester United ee waddanka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaadday in kulan lagu xusayo 11 sano guuradii ka soo wareegatay markii uu Carrick ku soo biiray kooxdaasi lagu sharfi doono laacibka Khadka Dhexe.
Kulankan oo ay isaga hor imaan doonaan xiddigihii United u qaaday Koobkii Horyaallada Yurub 2008 oo uu Carrick ku jiray iyo xiddigo la soo aruuriyay oo ku ciyaari doona magaca kooxda Carrick ayaa lagu qaban doonaa garoonka Old Trafford 04 Bisha June ee sanadkan, waxaana lacagta ka soo xaroota kulankaasi lagu wareejin doonaa hay’adda Michael Carrick Foundation oo iyaduna ku kaalmeyn doonta da’yarta soo koraysa.
Edwin van der Sar, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes iyo Ryan Giggs ayaa magaca United ku ciyaari doona halka kooxda Carrick-na ay ka mid noqon doonaan Steven Gerrard, Frank Lampard iyo Michael Owen, iyadoo isbuuca dambena la shaacin doono magacyada ciyaartoyda dhiman.
Carrick oo 35 sano jir ah ayaa qandaraaskiisa Manchester United uu dhammaanayaa aakhirka xilli ciyaareedkan, iyadoo loo badinayo in uu heshiis cusub u kordhin doono naadigiisa.
Aubameyang "Ma doonayo mar dambe inaan ka hadlo Real Madrid waayo hadal aan horey u iri ayaa qal qal geliyay mustaqbalkayga"
Fernando Torres oo fariin soo diray kadib dhaawicii soo gaaray xalay